ब्राण्ड बन्दै कफी घर - Parichaya.com
ब्राण्ड बन्दै कफी घर
कफीले बदल्दिएको सोभितको संसार । 'सकरात्मक सोचका साथ आउनुस्, सफलता अवश्य मिल्छ।’
By परिचय	 On १३ आश्विन २०७८, बुधबार १३:५९ 0
२०६५ साल ताका सोभित ठकुरी एसएलसी पास गरेर पोखरा झरे । पर्वतका लोर्के ठिटोलाई पोखरा नयाँ थिएन । मामाघर यतै भएकाले आउने जाने भइराख्थ्यो । १५ वर्षको कलिलै उमेरमा जिम्मेबारी बोध गरेका सोभितलाई पढाई सँगै काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । खाना लाउन त उनलाई समस्या थिएन । तर यत्तिले मात्रै जीवनको उडान कहाँ सम्भव थियो र ? लागिपरे जागिरको खोजीमा ।
२०६२ र ०६३ को जनआन्दोलनका कारण भर्खरै मात्र राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो । बहुदलीय शासन पद्धतीको सुरुवाती चरणमा नै थियो देश । यस्तो बेला जागिर पाउन कठिन परिस्थिति थियो । तर एउटा छलाङ मार्ने उद्देश्य लिएर अगाडि बढीरहेको ठिटोलाई कठिनताले रोकेन ।
केही समयको अथक प्रयास पछि सोभितले एक रेष्टुरेन्टमा वेटरको जागिर पाए । त्यतिबेला वेटरको काम भनेपछि अहिलेको जस्तो थिएन । परिआए भाँडा माझ्ने , ट्वाइलेट सफा गरी ग्राहकको सेवा गर्ने काम समेत भ्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । दिनभरीको कामले खाना लाउन मात्रै पुग्थ्यो । फेरि सोभितको काँधमा परिवारको जिम्मेबारी पनि थपिएको थियो । आफुलाई नपुग्ने तलबले परिवारको खुशी कसरी समेट्न सकिन्थ्यो ?
सोभितलाई यि र यस्तै चिन्ताले पिरोलिरहन्थ्यो । पोखराको सानो रेस्टुरेन्टको वेटरदेखी ठुला रेस्टुरेन्ट, होटलमा वेटर हुँदै म्यानेजर पद रहेर काम गरे । यस्तै फरक फिल्ड फरक सोचाई मन पराउने सोभित होटल लाइनबाट पोखरा एयरपोर्टमा समेत आबद्द रहेर हेलि एयर नेपालको म्यानजरका रुपमा दुई वर्ष काम गर्ने अवसर पाए । तर १० वर्षे जागिरे जीवनबाट पनि उनलाई सन्तुष्टि मिल्न सकेन । केही समय त उनी डिप्रेशनमै परे ।
कफीले बदल्दिएको सोभितको संसार
जागिरे जीवनले थकित रहेका सोभितको साथी मदिरा बन्न पुग्यो । डिप्रेशनलाई भुलाउन उनले मदिराको सहयोग लिन थाले । एकदिन अत्याधिक मदिरा सेवनले उनलाई थला पार्यो । त्यसपछि भने सोभित सोच्न बाध्य भए । मदिराको लतलाई भुलाउने बाटोको खोजीमा उनी लागि परे । खोज्दैजाँदा र अध्ययन गर्दैजाँदा कफीसँग जोडिन पुगे । जागिर नै होटललाइनमा भएकाले कफीको बारेमा जानकारी नै नभएको होइन उनलाई । तर दैनिक रुपमा कफी पिएपछि भने यसको महत्व सोभितलाई थाहा भयो । भन्छन्,‘बेलुका हुनेबित्तिकै मदिराको खोजीमा रेष्टुरेन्ट धाउने म अहिले परिवर्तन भएको छु । कफीले मेरो संसार बदल्दिएको छ ।’
व्यवसाय गर्ने हुटहुटी उनको पहिले देखि नै थियो । तर लगानी जुटाउनुपर्ने समस्या पनि उत्तिकै । अहिलेको जस्तो सहजै लगानी गर्ने वातावरण त्यतिबेला थिएन । ऋणधन गरेर व्यवसाय सुरुवात गर्न पनि डर थियो । ‘डरके आगे जित हे’ भनेझै कफीकै व्यवसायमा लाग्ने योजना बनाए सोभितले ।
साथीसँग मिलेर गरेको व्यवसायमा परेको घाटाले उनी मानसिकरुपमा अस्वस्थ थिए । त्यसैले पनि अब व्यवसाय गरियो भने एक्लै आँट्छु भन्ने अठोट उनमा थियो । मदिरा छोड्न पिएको कफीले एकदिन राम्रो व्यवसायी बनाउला उनले सोचेका थिएनन् ।
कफी घरको स्थापना
सोभितले सन् २०१९ मा करिब १२ लाखको लगानीमा कफी घरको स्थापना गरे । कफी घर संचालनमा आएसँगै कोभिडको महामारीले संसार आतातायी बन्यो । राम्रै सफलता प्राप्त गरिरहेको कफी घर लकडाउनका कारण बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ।
बन्दाबन्दीले अरु घरबासमा भएका बेला सोभित भने योजना बनाइरहेका थिए । कफी घरलाई अझै वृहत बनाउन उद्देश्य स्वरुप उनी लागिपरे । ‘लकडाउन भएपछि मैले योजनागत रुपमा काम गर्न धेरै समय पाए । ६ महिनाको अवधि त मलाई सिक्ने वातावरण मिल्यो । कफी घरलाई अझै परिस्कृत गरी पुनः संचालन गर्ने मनसाय बनाए ।’, उनले भने ।
कफीमै लगानी बढाउँदै सोभित
यसघडी सोभितले कफीका बारेमा धेरै अध्ययन गरेका छन् । सोहि अनुरुप पञ्चवर्षीय योजनाका आधारमा उनले कफी घरलाई नयाँ डिजाइन दिएका छन् । लकडाउनकै समय करिब एक करोड लागतमा पोखरा न्यूरोड स्ट्रिट नम्बर ९ भित्र कफी घरलाई फेरि नया स्वरुप दिएका छन । सोभितको कफी घर आकर्षण शैलीको छ । भन्छन्,‘कफी घरको बाहिरी आवरण समेत नयाँ बनाउने प्रयत्न गरेको छु । न्यूरोड जस्तो ठाउँमा पुरानो घर खोजेर त्यसलाई नै कफी सपको रुपमा संचालन गर्ने प्रयास मेरो हो ।’
कफी घर अहिले पोखराकै सबैभन्दा ठूलो एरियामा फैलिएको दाबी सोभित गर्छन । कफी गार्डन, हल र इन्डोर, उत्कृष्ट सिटीङ्ग एरेन्ज मस्त कफी पिउदै पुस्तकहरु पढ्न बस्ने, अफिस जस्तै काम गर्दै कफी पिउने , साथीभाई सङ्ग समुहमा गफिदै कफी पिउने कफी घरका विशेषता हुन् ।
कफी घरको आफ्नै बेकरी फ्याक्ट्री संचालन गरि सबै प्रकार बेकरी प्रोडक्टलाई घरघरमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सोभित लागि परेका छन । बारिस्टा र बेकरी तालिम दिई दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समेत जोड गरिएको उनी बताउँछन । सम्पूर्ण कफी सपलाई आवश्यक पर्ने सामान ( कफी बिन्स, कफी मेसिन, सप इन्टरियर डिजाइन ) जस्ता सर्भिस समेत कफी घरबाट उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । सीप सिकेर रोजगारीका लागि विदेश जाने र स्वदेशमै केही गर्नेहरुका लागि कफी घर उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्दा फरक नपर्ला । धेरै र फरक प्रकारका सेवासुविधा सहित घटस्थापनाको दिन देखि पुर्ण रुपमा कफी घर संचालनमा आउने भनाई सोभितको छ ।
‘वास्तविक कफीको स्वाद नेपालमा पाइदैन’
सोभितका अनुसार नेपालमा कफीको मार्केट बढ्दो छ । तर कफीको बिन्स कमसल खालको हुँदा नेपालीले वास्तविक कफीको स्वाद लिन नपाएको गुनासो उनको छ । सोभित भन्छन्,‘नेपालका अधिकांश कफी सपमा विदेशका कफीहरुको बिन्स भेटिएको छ । हामीले हाम्रो नेपालको उत्पादनलाई बेच्न पाएका छैनौं । नेपालमा अरबिका कफी उत्पादनको सम्भावना अत्याधिक भएता पनि लाभ लिन सकिएको छैन। अलिअलि उत्पादन भएको नेपाली कफीको राम्रो बिन्स त विदेशी बजारमा माग बढी छ । यहाँ हुने सबै बिन्स कमसल खालका हुन् । वास्तविक हाम्रो नेपाली कफीको स्वाद मिठो छ।’
भविष्यमा कफीलाई नै उनले कृषिमा परिणत गर्ने भएका छन् । कफी आफैले उत्पादन गरी त्यसको बजारीकरणमा समेत लाग्ने योजना सोभितको छ । कफी घरलाई ब्राण्ड बनाउन चाहन्छन् सोभित । हिजो आफैं जागिरेको रुपमा रहेका सोभित आज रोजगारदाता भएका छन् ।
सोभितको कफी घरमा प्राय सबै उमेरसमूहका व्यक्तिहरुको जमघट हुने गर्छ । भन्छन्,‘कफी घर अहिले सबैका लागि प्रिय बन्दै गएको छ । पोखराका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको जमघट हुने थलो बनेको छ ।’सीप सिकेर र बजारलाई बुझेर मात्र व्यवसायमा लाग्न सोभितको सुझाव छ । हतारमा गरिएको काम लतार हुनसक्ने भन्दै आफुले जानेको विषयलाई मात्र व्यवसायमा ढाल्न सके लाभ लिन सकिने अनुभवका आधारमा सोभित बताउँछन् । भन्छन्, ‘मैले धेरै समस्या भोग्दै यहाँ सम्म आइपुगेको छ । पहिले त सीप सिक्ने ठाउँनै कम हुन्थे,अहिले धेरै छन् । त्यसैले कुनै पनि विषयको गहिरो अध्ययन गरेर व्यवसाय क्षेत्रमा होमिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सकरात्मक सोचका साथ आउनुस्, सफलता अवश्य मिल्छ ।’
सुदूरपहाडी जिल्लामा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएनन्
स्याङ्जाका एक किशोर २१ दिनदेखि सम्पर्कविहीन